Fabregas "Wali Waan Jecelahay Arsenal"
Fabregas "Wali Waan Jecelahay Arsenal" 0 July 29, 2015 in Wararka by Staff SLL Media News Reporter Visits: 493
Fabregas "Wali Waan Jecelahay Arsenal" Kooxda Chelsea, Fabregas ayaa sheegay inuu weli jeceyl u hayo kooxda Arsenal inkastoo xaqiiqda ay tahay inay taageerayaal badan ku ooriyeen islamarkaana ku aflagaadeeyeen ku soo laabashadiisii Emirates Stadium xilli ciyaareedkii hore.
Xiddiga khadka dhexe ee Chelsea ayaa diyaar u ah inuu ka horyimaado kooxdiisa hore koobka Community Shield maalinta axada, waxaana uu kala qeybiyay jamaahiirta kooxdiisa hore, waa lagu ooriyay markii uu garoonka soo galayay, kuwa badan ayaana u sacbiyay markii la bedelayay.
Fabregas ayaana sheegay in jaceylka uu u hayo Arsenal inay saameyn ku yeelan doonin waxa uu kala kulmo axada taageerayaashiisii hore.
"Wax walba oo ay tahay waa sida ay tahay” ayuu yiri Fabregas. "Jaceylka aan u hayo kooxdaas marnaba isma bedeli doono wax walba oo dhaca, waxa ugu muhiimsan ayaana ah wixii aan halkaas ku heystay markii aan joogay.
"Inta soo hartay waxba ma ahan, xusuusyo waa weyn ayaan ka heystaa, ixtiraam ayaana u hayaa kooxda. Marnaba ugama maqli doontaan anigoo wax xun ka sheegaya iyaga.
Daawo ABWAAN CUSUB OO KU DHEGAY WEEDHSAME-Miiraaj Galbeed Gabay Cusub oo Qayb Ka Ah Silsilada Miimley-ABWAAN HAYBE AXMED YUUSUF
15/04/2017 - 11:22:00
Halkan Ka Daawo Abwaan Weedhsame oo soo saaray Maanso Cusub "Maax dareen lulay"oo ku saabsan Musuqa hadheeyay Somaliland
11/04/2017 - 08:29:59